अस्पतालले निको पार्न नसकेका बिरामी "तातोपानी" मा डुबेपछि ठिक भए !
January 30, 2018 Rochak Jankaribeni, heal, myagdi, natural, nepal, pond, tatopani, treatment
यो पनि पढ्नुहोस् : किन हुदैछ सशस्त्र भित्र सीमा सुरक्षा विभाग हटाउने चलखेल ?
यो पनि पढ्नुहोस् : महिला हरु यौन इच्छा कसरी प्रकट गर्छन् ?
यो पनि पढ्नुहोस् : सधै गोजीमा सुकमेल बोकेर हिड्नुस ! सुन्दा अचम्म लाग्ला तर फाइदा गजब छ !